Madda Walaabuu Press: SHIRA WAYYAANEE FI 2020
Wayyaanoonni kaleessa waan Biyya keessaa irratti gaggeeffamuu gama hundaan Ukkaamsitee, Biyyoota alaa sobaa fi Umurii dheereffachuu turtee. Har’a garuu toftaan kun akka ishee hin baafnee addunyaatu itti dubbachaa jira. Wayyaanee Ihaadeeg, Biyya alaa fi Biyya keessaatti, gonkumaa fudhatama akka hin qabnee ifatti waan hubatan barbaadu. Haa ta’uutii, wayyaaneen toftaan amma itti jirtuu, gaaffii humnoonni alaa fi Ummatoonni Biyya keessaa ishee gaafachaa jiran, karaa barbaadduun hiikuuf qophiitti jiraachuu ifatti argaa jirra. Kanammoo irratti hojjannee fashalsuu qabnaa. Humnoonni alaas ta’an Ummatoonni Biyyaa, addatti, Ummati Oromoo gaafachaa jiran, akka isaaniif ta’utti deebii itti kennuu barbaadu. Ammallee shira biraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti raawwachuu barbaadu. qabxiileen isheen Ummatootaa fi humnoota alaa dura qabdee Filannoo 2020 hanga ga’uutti itti dhimma ba’uu barbaadduu:
Wayyaaneen qaanii hin beeknee, gidduu dabree janaraaloota muudeetti. Kun ol aantummaan Tigirootaa jiraa isa jedhuu Ukkaamsuufii. Garuu kun gaaffii Ummatootaaf deebii hin ta’uu. Shira . shira kana gonkumaa hin fudhannuu jechuu barbaachisaa. Kanarra taranii Angoo Mummicha ministirummaa Oromoof laannaa jedhuu. Namni irra jireessa Lammaa maqaa dhahaa. Ani garuu caraan sun jiraannaan, Warqinah Gabayyoof kennu. Maaliif ? jennaan deebii quubsaa yeroo biraa dhiheessn qaba. Waan maraafuu, Qabsoon Oromoo mirga abbaa Biyyuummaaf ta’uu mirkaneessuudhaa. Shirri kunis, Filannoo 2020 irratti wayyaaneef sagalee laachisiisuuf irratti hojjatamaa jira.